Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa la saxeexatay difaacii da’da yarta Manchester United ee Reuell Walters kaas oo qalinka ku duugay heshiis rasmi ah oo uu Gunners kaga mid noqonayo.
Tilmaan Ole Gunnar Solskjær
Jurgen Klopp ayaa sharaxaya sababta uu Matip u maqan yahay
15 jirkan ayaa Manchester United kusoo biiray sannadkii hore, balse waxa uu hadda usii dhaafay Arsenal oo nasiib u yeelatay inay gacanta ku dhigto.
Mikel Arteta oo fursadaha uu siinayo da’yarta kooxdiisu ay dhiirigelin iyo soo jiidasho u tahay ciyaartoyda jiilkooda ah ee mustaqbalka wanaagsan doonaya ayaa waxay Manchester United si lama filaan ah uga soo qaadatay da’yarka Walers.
Laacibkan ayaa sannadkii hore ku biiray Manchester United isagoo uga soo wareegay Tottenham Hotspur oo uu kulliyaddeeda kasoo baxay, laakiin Red Devils ayaa xajisan weyday.
Walters oo ka ciyaara difaaca midig ayaa qalinka ugu duugay Arsenal heshiis rasmi ah oo uu kaga mid noqonayo kooxdan reer London, waxaana la filayaa inuu si toos ah uga mid noqon doono da’yarta U16, isagoo fursad u heli doona inuu heerarka kala duwan ee kuliyadda kooxda soo maro, illaa inta uu fursad ka helayo kooxda koowaad.
Arsenal ayaa waxa kale oo ay dhamaystirtay saxeexa Jonathan Dinzeyi oo xagaagii ay kasoo qaadatay kooxda ay cadaawadda weyni ka dhaxayso ee ay ka wada dhisan yihiin woqooyiga London ee Tottenham Hotspur, taas oo uu Walters na ugu sii darsamay.
Da’yarkan difaaca midig ka ciyaara ayaa farriin uu ku daabacay bartiisa Twitterka waxa uu ku sheegay inuu u bilowday cutub cusub oo noloshiisa ah, waxaanu u mahad celiyey cid kasta oo safarkiisa qayb kasoo ahayd, gaar ahaan hooyadii, aabbihii, walaashii, qoyskiisa iyo asxaabtiisa. Waxa kale oo uu u mahad celiyey Arsenal oo fursadda siisay.
axadle 5768 posts
Sneaky weight reduction ways that work